Wararka - Baadh jahooyinka cusub ee 5G keenaya Internetka Baabuurta iyo isgaarsiinta V2X
Raadi jahooyinka cusub ee 5G keenaya internetka Gawaarida iyo isgaarsiinta V2X
ITProPortal waxaa taageera dhagaystayaasheeda. Markii aad wax ku iibsaneysid xiriiriye websaydhkeenna, waxaa laga yaabaa inaan helno guddi gacansaar la leh. Wax dheeri ah baro
Hadda waxaan haynaa tiknoolajiyada gawaarida internetka (V2X), waxaan ku faraxsanahay isdhexgalka tiknoolajiyada 5G iyo xalalka softiweerka gawaarida si loo horumariyo jiil cusub oo baabuur casri ah.
Isku xirnaanta gawaarida waa xalka xiisaha leh ee yareynaya shilalka taraafikada waddooyinka adduunka oo dhan. Nasiib darrose, 2018, shilalka taraafikada waddooyinka waxaa ku dhintay 1.3 milyan oo qof. Hadda waxaan haynaa tiknoolajiyada Internetka ee Gawaarida (V2X), waxaan ku faraxsanahay isdhexgalka tiknoolajiyada 5G iyo xalalka softiweerka gawaarida ee horumarinta jiilka cusub ee gawaarida casriga ah si loo hagaajiyo khibrada darawalnimada iyo dib u soo celinta gawaarida si ay u guuleystaan.
Baabuurtu hadda waxay la kulmayaan isku xirnaan badan iyo in ka badan, iyagoo la falgalaya codsiyada hagidda, dareemayaasha dusha sare, nalalka taraafikada, goobaha gawaarida la dhigto, iyo nidaamyada kale ee baabuurta. Gaarigu wuxuu isku xiraa deegaanka ku hareeraysan iyada oo loo marayo aaladaha qabashada qaarkood (sida kamaradaha muraayadaha iyo dareemayaasha raadaarka). Gawaarida isku xira waxay uruuriyaan xog fara badan, sida masaafada, burburka ku yimid qeybaha dhulka, cadaadiska taayirka, heerka qiyaasta shidaalka, xaalada qufulka gaariga, xaaladaha wadada, iyo xaaladaha baarkinka.
Qaab dhismeedka 'IoV' ee xalalka warshadaha baabuurta waxaa taageera xalalka softiweerka baabuurta, sida GPS, DSRC (isgaarsiinta gaaban ee go'an), Wi-Fi, IVI (gaadhiga ku jira), xog weyn, barashada mashiinka, Internetka Waxyaabaha, macmalka sirdoonka, SaaS Platform, iyo isku xirka qadka.
Tiknoolajiyada V2X waxay muujineysaa inay tahay isku xirnaanta gawaarida (V2V), gawaarida iyo kaabayaasha (V2I), gawaarida iyo kaqeybgalayaasha kale ee taraafikada. Balaadhinta, hal-abuurnimadani waxay sidoo kale qaadi karaan dadka lugaynaya iyo kuwa baaskiil wadayaasha ah (V2P). Marka la soo koobo, dhismaha V2X wuxuu u suurta geliyaa baabuurta inay “la hadlaan” mashiinnada kale.
Gawaarida nidaamka wareejinta: Xogta laga soosaaray khariidada, GPS iyo qalabka kale ee gawaarida ogaada waxay xisaabin karaan waqtiga imaatinka gaariga la raray, meesha uu shilka ka dhacay inta lagu gudajiro nidaamka sheegashada caymiska, xogta taariikhiga ah ee qorsheynta magaalooyinka iyo yareynta qiiqa kaarboon, iwm .
Baabuur loogu talagalay kaabayaasha gaadiidka: Tan waxaa ka mid ah calaamadaha, talooyinka taraafikada, qaybaha lacag-ururinta, goobaha shaqada, iyo goobaha tacliinta.
Gawaarida nidaamka gaadiidka dadweynaha: Tani waxay soo saartaa xog laxiriirta nidaamka gaadiidka dadweynaha iyo xaaladaha taraafikada, iyadoo lagu talinayo wadooyin kale marka dib loo qorsheynayo safarka.
5G waa jiilka shanaad ee isku xirka taleefanka gacanta. Asal ahaan, inta jeer ee ay shaqeyneyso ayaa ka sarreeya 4G, sidaa darteed xawaaraha isku xirnaanta ayaa 100 jeer ka wanaagsan 4G. Iyadoo loo marayo kor u qaadista awooddan, 5G waxay bixisaa hawlo awood badan.
Waxay si dhakhso leh uga baaraandegi kartaa xogta, iyadoo siineysa 4 milliseconds xaaladaha caadiga ah iyo 1 millisecond iyada oo lagu marayo xawaaraha ugu sarreeya si loo hubiyo jawaabta degdegga ah ee aaladaha ku xiran.
Nasiib darro, sannadihii dhexe ee la sii daayay 2019, casriyaynta waxaa lagu qabtay muran iyo dhibaatooyin, tan ugu daranna waxay ahayd xiriirkeeda dhibaatadii caafimaad ee dhowaan adduunka ka dhacday. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo bilowgii adkaa, 5G wuxuu hadda ka hawl galayaa 500 magaalo oo ku yaal Mareykanka. Soo gelitaanka caalamiga ah iyo qaadashada shabakadan ayaa dhow, sida saadaasha sanadka 2025 ay muujineyso in 5G ay kor u qaadi doonto shan meelood meel internetka internetka.
Dhiirrigelinta loo dirayo 5G ee tiknoolajiyada V2X waxay ka timid socdaalka baabuurta ee kaabayaasha gacanta (C-V2X) - tani waa tii ugu dambeysay uguna sareysay ee wax soo saar ee loogu talagalay gawaarida isku xiran iyo kuwa iswada. Shirkadaha caanka ah ee sameeya gawaarida sida Audi, Ford iyo Tesla ayaa gawaaridooda ku qalabeeyay tiknoolajiyadda C-V2X. Macnaha guud:
Mercedes-Benz waxay iskaashi la yeelatay shirkadaha Ericsson iyo Telefónica Deutschland si loogu rakibo 5G gawaarida iswada ee ku xiran qeybta wax soo saarka.
BMW waxay iskaashi la samaysay Samsung iyo Harman si ay u soo saaraan BMW iNEXT oo ku qalabaysan a 5G oo saldhig ku leh telematics control (TCU).
Audi wuxuu ku dhawaaqay 2017 inay gawaaridoodu awood u yeelan doonaan inay la falgalaan laydhadhka taraafikada si ay u feejignaadaan marka darawalku u beddelo casaan ilaa cagaar.
C-V2X wuxuu leeyahay awood aan xad lahayn. Qaybaheeda waxaa loo adeegsaday in kabadan 500 magaalo, degmooyin iyo degmooyin tacliimeed si loo helo isku xirnaansho ismaamul ah oo loogu talagalay nidaamyada gaadiidka, kaabayaasha tamarta iyo tas-hiilaadka dhismaha.
C-V2X wuxuu keenaa nabadgelyada taraafikada, waxtarka iyo khibradda darawalnimada / lugaynta oo hagaagtay (tusaale fiican ayaa ah nidaamka digniinta gawaarida acoustic). Waxay u oggolaaneysaa maal-gashadayaasha iyo taangiyada fakarka inay sahamiyaan habab cusub oo horumar ballaaran ah xaalado badan. Tusaale ahaan, adoo adeegsanaya dareemayaal iyo xog taariikhi ah si aad u hawlgeliso "telepathy dijitaal ah", wadis wadid iskuxidhan, kahortagga shilalka iyo digniinaha amniga ayaa lagu gaari karaa. Aynu si qoto dheer u fahamno codsiyada badan ee V2X ee taageera 5G.
Tani waxay ku lug leedahay isku xirka cybernetic-ka ee gawaarida wadada weyn ee diyaaradaha. Jaangooynta udhawda dhamaadka ee gaariga ayaa u oggolaaneysa dardargelinta, isteerinka iyo kala jebinta leysku habeeyay, taas oo markaa wanaajineysa waxtarka wadada, keydinta shidaalka iyo yareynta qiiqa. Gawaarida xamuulka ah ayaa go'aamiya wadada, xawaaraha iyo baaxada gawaarida kale. Gawaarida xamuulka ee 5G-ku xiran ayaa ogaan kara safarka masaafada dheer. Tusaale ahaan, marka seddex ama kabadan gaari ay wadaan darawalna uu seexanayo, gaariga xamuulka ah wuxuu si otomaatig ah u raacayaa hogaamiyaha platoon, taasoo yareyneysa qatarta darawalka ee hawo. Intaas waxaa sii dheer, marka gaariga xamuul ah ee hogaaminaya uu ku dhaqaaqo ficil wax u dhimayo, gawaarida kale ee gadaasha gadaal ayaa sidoo kale fal celin doona isla waqtigaas. Soosaarayaasha qalabka asalka ah sida Scania iyo Mercedes waxay soo bandhigeen moodellada waddooyinka, dhowr gobol oo ka tirsan Mareykanka ayaa qaatay gawaari iskiis u raacaya. Sida laga soo xigtay Scania Group, gawaarida xamuulka ah ee safafka ku jira waxay yareyn karaan qiiqa qiiqa ilaa 20%.
Kani waa horumar baabuur oo isku xiran sida gaariga uu ula falgalo xaaladaha waaweyn ee taraafikada. Baabuur ku qalabeysan qaab dhismeedka V2X wuxuu baahin karaa macluumaadka dareemayaasha leh darawalada kale si uu isugu dubbarido dhaqdhaqaaqooda. Tani waxay dhici kartaa markii hal gaari uu ag maro isla markaana gaari kale uu si otomaatig ah u gaabiya si uu ula qabsado dhaqdhaqaaqa. Xaqiiqooyinka ayaa cadeeyay in iskuduwida firfircoon ee wadaha gaariga ay si wax ku ool ah u xakameyn karto carqaladeynta ay keeneen isbedelada haadka, bareegyada lama filaanka ah iyo howlaha aan qorsheysneyn. Adduunyada dhabta ah, wadista wadajirka ah waa mid aan macquul aheyn iyada oo aan tiknoolajiyada 5G.
Farsamadan ayaa taageerta darawalka iyadoo la siinayo ogeysiis shil kasta oo dhaca. Tani badanaa waxay muujisaa inay tahay dib u habeyn toos ah isteerinka ama bareeg qasab ah. Si loogu diyaar garoobo isku dhaca, gaariga wuxuu gudbiyaa booska, xawaaraha, iyo jihada laxiriirta gawaarida kale. Iyadoo loo marayo tikniyoolajiyadda isku xirnaanta gaariga, darawallada waxay u baahan yihiin oo keliya inay soo saaraan aaladooda casriga ah si looga fogaado garaacista baaskiilleyda ama dadka lugeynaya. 5G ka mid noqoshada waxay sare u qaadeysaa shaqadan iyadoo la abuurayo xiriiro fara badan oo ka dhexeeya gawaarida kala duwan si loo go'aamiyo goobta saxda ah ee gaari kasta oo la xiriira kaqeybgalayaasha kale ee taraafikada.
Marka loo barbardhigo noocyada kale ee gawaarida, gawaarida iswada waxay ku tiirsan yihiin durdurrada xogta degdegga ah. Marka la eego xaaladaha waddooyinka oo is beddelaya, waqtiga jawaabta degdegga ahi waxay dedejin kartaa go'aan qaadashada waqtiga dhabta ah ee wadaha. Helitaanka goobta saxda ah ee dadka lugaynaya ama saadaalinta iftiinka cas ee soo socda ayaa ah qaar ka mid ah dhacdooyinka tikniyoolajiyadda ay ku muujineyso suurtagalnimadeeda. Xawaaraha xalkaan 5G wuxuu ka dhigan yahay in ka shaqeynta xogta daruuriga ah ee loo maro AI ay baabuurta u sahasho inay si deg deg ah u gaaraan go'aano aan la caawin. Adoo gelinaya xogta gawaarida casriga ah, hababka barashada mashiinka (ML) waxay wax ka qaban karaan deegaanka gaariga; baabuurka u kaxee meel joogsi ah, tartiib tartiib, ama ku amro inuu beddelo haadka. Intaa waxaa sii dheer, iskaashiga xoogan ee u dhexeeya 5G iyo xisaabinta geesku waxay si dhakhso leh u socodsiin karaan xogta.
Waxa xiisaha lihi, dakhliga ka soo baxa qaybta baabuurta ayaa si tartiib tartiib ah u dhex gala qaybaha tamarta iyo caymiska.
5G waa xalka dhijitaalka ah ee u keenaya faa iidooyinka aan la heli karin adduunka baabuurta adoo hagaajinaya sida aan ugu adeegsano isku xirnaanta wireless-ka marin hagista. Waxay taageertaa tiro badan oo isku xirnaanta aag yar ah waxayna heshaa meel sax ah oo ka dhakhso badan tiknoolajiyaddii hore. Qaab dhismeedka VGX ee 5G lagu wado waa mid aad loogu kalsoonaan karo, oo leh daahitaan yar, wuxuuna leeyahay faa'iidooyin isdaba joog ah, sida isku xirnaan sahlan, qabashada xogta degdega ah iyo gudbinta, nabadgelyada waddooyinka oo la xoojiyay, iyo hagaajinta gawaarida oo la hagaajiyay.
Saxeex hoose si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ee ITProPortal iyo dalabyo gaar ah oo gaar ah oo toos loogu diro sanduuqaaga!
ITProPortal waa qayb ka mid ah mustaqbalka plc, oo ah koox warbaahin caalami ah isla markaana horseed u ah daabacaadda dhijitaalka ah. Booqo boggayaga shirkadda.
Daabacaadda Xaddidan ee Quay House, Ambury, Bath BA1 1UA. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan Lambarka diiwaangelinta shirkadda England iyo Wales 2008885.